ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် SARS-CoV-2 ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ် တဲ့ ကိုဗစ် (COVID-19) ရောဂါဟာ ခုဆို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံနဲ့ နယ်မြေဒေသပေါင်း ၁၈၀ ကျော် မှာ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူပေါင်း ၃သိန်းကျော် ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး လူပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော် သေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနဲ့လာအိုကလွဲပြီး အိမ်နီးချင်း အာဆီယံဒေသတိုင်းလိုလို ကူးစက်မှုကို ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အချိန်မရွေးရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိတာကြောင့် အစိုးရပိုင်းက စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသလို ပြည်သူအများစုကလည်း စိုးရိမ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာခုအချိန်ထိကံကောင်းနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံသားသောင်းချီကြောင့် စိုးရိမ်စရာတွေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ရလဲ? ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ ဆိုတာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်…
ဝူဟန်လို့ခေါ်ကြတဲ့ Corona Virus ပထမလှိုင်းဟာ ဝူဟန်မြို့ကနေ တရုတ်တနိုင်ငံလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ Corona Virus ဒုတိယလှိုင်းကတော့ ဝူဟန်စပြန့်ပြီး တစ်လကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ စဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကူးစက်မှုတွေ လျော့ကျသွားပြီး ဥရောပမှာ ကူးစက်မှု အပျံပွားဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ် စတဲ့နိုင်ငံတွေက ကူးစက်နှုန်းဟာ တရုတ်ကို ကျော်တက်လာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနဲ့လာအိုကတော့ Corona Virus ဒုတိယလှိုင်းမှာလည်း ကံကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ခုစိုးခရိမ်စရာကောင်းလာတာက မြန်မာ လာအိုနဲ့အတူ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု မခံရသေးတဲ့ ဆင်းရဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ပြန်ဝင်လာကြတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမလှိုင်းမှာ ဝူဟန်နဲ့ထိစပ်သူ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေတော်တော်များများထိခဲ့ကြသလို ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဝူဟန်ကို လျော့တွက်ခဲ့တဲ့ အကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ ထိခဲ့ကြပါတယ်။ အခုရင်ဆိုင်ရမှာတော့ ရောဂါဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကြောက်လန့်တကြား ပြန်လာနေကြပြီဆိုတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာကို ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ သောင်းနဲ့ချီပြန်လာနေကြပါပြီ။ သူတို့ကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်မလာနဲ့လို့ ပိတ်ထားလို့လည်းမရပါဘူး။ ခုအချိန်မှာ အားလုံးလက်တွဲညီရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ရောဂါဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ ဆိုကြပါစို့ထိုင်းမှာဆို ကုန်တိုက်တွေ စျေးဝယ်စင်တာတွေ ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ ဒါတွေကို ကြိုတင်မပြင်ဆင်ထားတဲ့မြန်မာတွေဟာသူတို့ အမိမြေကိုပဲ ပြန်လာရတော့တာပါ။ ပြည်ပကပြန်လာတဲ့ ရွှေမြန် မာတွေရဲ့မြဝတီနယ်စပ်က မြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင် ကြောက်စရာကောင်းသလို သနားစရာလည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်နော်..ဒီတော့ အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒီလူအုပ်ကြီးကို ဘယ်လိုထိန်းမလဲ? ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ? ရောဂါဘယ်လိုစစ်မလဲ?
မတ်လကုန်လောက်ဆို ထိုင်းကနေပဲ မြန်မာအလုပ်သမား ၃ သိန်းလောက်ပြန်လာဖို့ရှိနေသေးတာပါ။ သူတို့ကို ဂိတ်တွေမှာ စစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဂိတ်တွေ လေဆိပ်တွေက စစ်တဲ့စက်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိ မစစ်နိုင်ပါဘူး။ အပူချိန်ကို စစ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြည်ပကပြန်လာတဲ့ သူတွေကို အချိန်ကာလတစ်ခုယူ သီးသန့်ထားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမှာ မဟုတ်ပါလား?
မြန်မာပြည်အတွက် အရေးကြီး ၁၄ရက်
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတစ်ယောက်မှမရှိသေးပေမယ့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဆီကနေ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုဟာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လဲ ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းအတွက် ပြုစုကုသရန်နေရာများသီ းသန့်ပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်​ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စင်ကာပူနဲ့တရုတ်မှာ အသစ်ထပ်တွေ့တဲ့လူတွေက တခြားနိုင်ငံတွေကနေ ပြန်လာတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ၂ဦးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက် သူတို့နဲ့နီးစပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေပြန်လာသူတွေထဲမှာ ပါ လာခဲ့ရင်ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဒီတော့ သူတို့ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုထားမလဲ ရောထွေးပြီးလည်း စောင့်ကြည့်လို့မရဘူး။ ပြန်လာသူတွေကို စုပေါင်းပြီး Quarantineလုပ်မဲ့နေရာတွေမှာ အားလုံးရောထားပြီး ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ဘုံသုံးပုံစံမျိုးဆို ကူးဖို့ ပိုအန္တရယ်များလာနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာက ဝူဟန်ပိုး သယ်ဆောင်လာသူ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူဆိုရင် ၁၄ရက်အတွင်းမှာSing ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ၁၄ရက်က တကယ်ကို အရေးကြီးလာပါပြီ။
ဒီ၁၄ရက်ကာလအတွက် အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်.။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့ လျော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆို့ ပြည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကစပြီး NGOတွေ၊ CSOတွေ ဗော်လန်တီယာတွေ အမြောက်အမြားလိုလာပါပြီ။ ဘာလို့ဆို ခုချိန်ထိ အစိုးရဘက်က ဘာမှ စနစ်တကျ တိတိလင်းလင်း ချပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနကတော့ ဗော်လန်တီယာတွေခေါ်ယူနေပါပြီ။ ဒီတော့ အစိုးရတစ်ရပ်တည်းနဲ့ မနိုင်ရင် ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်သင့်လဲဆိုတာ အစိုးရက ချပြဖို့လိုပါတယ်။ သေသေချာထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်..
အခုပြည်တော်ပြန်လာသူတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တတိယလှိုင်းကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ တချိ့ပြန်လာသူတွေက သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး စောင့်ကြည့်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး သူတို့အိမ်ကို တန်းပြန်သွားသူတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့သူတိုင်းက ရန်ကုန်က မဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့အိမ်သူ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး တန်းပြန်သွားတဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေဆီကပိုးပြန်ပါလာနိုင်တဲ့ Corona Virus တတိယလှိုင်းကိုတော့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ အတော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြန်ဝင်လာသူတွေဆီကနေ ရောဂါပိုးတွေပါလာတာကြောင့် ကူးစက်သူဦးရေ ချက်ခြင်းပြန်တိုးလာတဲ့ စင်ကာပူနဲ့ ဘာသာရေးပွဲတွေ လူစုလူဝေးတွေကို လွှတ်ပေးထားလို့ လူသေဆုံးနှုန်း ကူးစက်နှုန်း မြင့်တက်သွားတဲ့ သြစတြေးလျနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ကို သင်ခန်းစာယူပြီး မြန်မာပြည်ကြီး ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရယ်က ကင်းဝေးအောင် ဝိုင်းဝန်းလုပ် ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် လူများစွာ ကို မထိခိုက်အောင် စည်းကမ်းလေးတွေသေချာလိုက်နာပေးပါ။
အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေ အကြံပြုချက်တွေ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပေးပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစပြီး ကာကွယ်ပေးပါ။ (အကြံပြုချက်များအတိုင်း)
ကိုယ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် လက္ခဏာသံသယရှိသူတွေတွေ့ရင် သက်ဆိုင်ရာကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးပါ
ပြည်ပက ပြန်လာပြီး စောင့်ကြည့်မခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေတွေ့ရင် သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပါ
Stay Homeစနစ်ကို ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုလည်း ကောင်းပါတယ်
မလိုအပ်ပဲ ခရီးသွားလာခြင်းတွေရှောင်ပါ(အချိန်မရွေး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မြိုတွေကိုပိတ်ချပစ်နိုင်ပါတယ်)နော်..
ကဲ..ဒီလောက်ဆို ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ တတိယလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးကို မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ချင်းစီက မကူးစက်အောင် အကောင်းဆုံး ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလေးတွေသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်.. မြန်မာနိုင်ငံကြီးကံကောင်းပါစေနော်…
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် SARS-CoV-2 ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ် တဲ့ ကိုဗစ် (COVID-19) ရောဂါဟာ ခုဆို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံနဲ့ နယ်မြေဒေသပေါင်း ၁၈၀ ကျော် မှာ ဖြစ်ပွား လူပေါင်း ပါပြီ။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူပေါင်း ၃သိန်းကျော်မှာ ကူးစက်ခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၁၃၀၀၀ ကျော် သေဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနဲ့လာအိုကလွဲပြီး အိမ်နီးချင်း အာဆီယံဒေသတိုင်းလိုလို ကူးစက်မှုကို ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အချိန်မရွေးရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိတာကြောင့် အစိုးရပိုင်းက စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသလို ပြည်သူအများစုကလည်း စိုးရိမ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ခုအချိန်ထိ ကကောင်းနေသေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေက ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံသားသောင်းချီကြောင့် စိုးရိမ်စရာတွေရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်စိုးရိမ်ရလဲ? ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ? ဝူဟန်ကို အလွန်အကျွံကြောက်ဖို့လိုလားဆိုတာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်…
ဝူဟန်လို့ခေါ်ကြတဲ့ Corona Virus ပထမလှိုင်းဟာ ဝူဟန်မြို့ကနေ တရုတ်တနိုင်ငံလုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ Corona Virus ဒုတိယလှိုင်းကတော့ ဝူဟန်စပြန့်ပြီး တစ်လကျော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ စဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကူစက်မှုတွေ လျော့ကျသွားပြီး ဥရောပမှာ ကူးစက်မှု အပျံပွားဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အီတလီ စပိန် ဂျာမနီ ပြင်သစ် စတဲ့နိုင်ငံတွေက ကူးစက်နှုန်းဟာ တရုတ်ကို ကျော်တက်လာနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနဲ့လာအိုကတော့ Corona Virus ဒုတိယလှိုင်းမှာလည်း ကံကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ခုစိုးရိမ်စရာကောင်းလာတာက မြန်မာ လာအိုနဲ့အတူ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု မခံရသေးတဲ့ ဆင်းရဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေက ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ပြန်ဝင်လာကြတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ရပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမလှိုင်းမှာ ဝူဟန်နဲ့ထိစပ်သူ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေတော်တော်များများထိခဲ့ကြသလို ဒုတိယလှိုင်းမှာ ဝူဟန်ကို လျော့တွက်ခဲ့တဲ့ အကြောက်အလန့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေ ထိခဲ့ကြပါတယ်။ အခုရင်ဆိုင်ရမှာတော့ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြောင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားလာနိုင်တဲ့ တတိယလှိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နိုင်ကြမလဲ
သိန်းနဲ့ချီပြန်လာကြမယ့် နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားကြလဲ?
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာကို ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ သောင်းနဲ့ချီပြန်လာနေကြပါပြီ။ သူတို့ကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဝင်မလာနဲ့လို့ ပိတ်ထားလို့လည်းမရပါဘူး။ ခုအချိန်မှာ အားလုံးလက်တွဲညီရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းမှာလည်း ကုန်တိုက်တွေ စျေးတွေတော်တော်များများ ပိတ်ကုန်ပြီဖြစ်လို့ ဘာမှကြိုတင် ဝယ်ယူစုဆောင်းထားမှုမရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက သူတို့အမိမြေကို ပြန်ပြေးကြတာပါ။
မတ်လကုန်လောက်ဆို ထိုင်းကနေပဲ မြန်မာအလုပ်သမား ၃ သိန်းလောက်ပြန်လာဖို့ရှိနေသေးတာပါ။ သူတို့ကို ဂိတ်တွေမှာ စစ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဂိတ်တွေ လေဆိပ်တွေက စစ်တဲ့စက်တွေက ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိမစစ်နိုင်ပါဘူး။ အပူချိန်ကို စစ်ခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်ပကပြန်လာတဲ့ သူတွေကို အချိန်ကာလတစ်ခုယူ သီးသန့်ထားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမှာ မဟုတ်ပါလား? အဲ့ဒီလို သီးသန့်ထား စောင့်ကြည့်နိုင်မယ့်နေရာတွေ နေထိုင်စားသောက်မှုတွေ အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲဆိုတာတော့ တိတိကျကျ ဘာမှမသိရသေးပါဘူး။
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရောဂါကူးစက်ခံရသူတစ်ယောက်မှမရှိသေးပေမယ့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဆီကနေ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုဟာ ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စင်ကာပူနဲ့တရုတ်မှာ အသစ်ထပ်တွေ့တဲ့လူတွေက တခြားနိုင်ငံတွေကနေ ပြန်လာတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ၂ဦးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက် သူတို့နဲ့နီးစပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မြန်မာတွေပြန်လာသူတွေထဲမှာ ပါလာခဲ့ရင်ရော ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဒီတော့ သူတို့ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုထားမလဲ ရောထွေးပြီးလည်း စောင့်ကြည့်လို့မရဘူး။ ပြန်လာသူတွေကို စုပေါင်းပြီး Quarantineလုပ်မဲ့နေရာတွေမှာ အားလုံးရောထားပြီး ဘုံသုံးပုံစံမျိုးဆို ကူးဖို့ ပိုအန္တရယ်များလာနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကဝူဟန်ပိုး သယ်ဆောင်လာသူ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူဆိုရင် ၁၄ရက်အတွင်းမှာ ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ၁၄ရက်က တကယ်ကို အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ထားကြပါသလဲ?
ဒီ၁၄ရက်ကာလအတွက် အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်.။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက တော့ ဗော်လန်တီယာတွေခေါ်ယူနေပါပြီ။ ဒီတော့ အစိုးရတစ်ရပ်တည်းနဲ့ မနိုင်ရင် ပြည်သူတွေ ဘယ်လိုပါဝင်သင့်လဲဆိုတာ အစိုးရက ချပြဖို့လိုပါတယ်။ သေသေချာထိန်းချုပ် စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်..
အခုပြည်တော်ပြန်လာသူတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ တတိယလှိုင်းကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲ တချိ့ပြန်လာသူတွေက သူတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး စောင့်ကြည့်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီး သူတို့အိမ်ကို တန်းပြန်သွားသူတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့သူတိုင်းက ရန်ကုန်က မဟုတ်တဲ့အတွက် သူ့အိမ်သူ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး တန်းပြန်သွားတဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေဆီကပိုးပြန်ပါလာနိုင်တဲ့ Corona Virus တတိယလှိုင်းကိုတော့ ကျော်ဖြတ်ဖို့ အတော်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြန်ဝင်လာသူတွေဆီကနေ ရောဂါပိုးတွေပါလာတာကြောင့် ကူးစက်သူဦးရေ ချက်ခြင်းပြန်တိုးလာတဲ့ စင်ကာပူနဲ့ ဘာသာရေးပွဲတွေ လူစုလူဝေးတွေကို လွှတ်ပေးထားလို့ လူသေဆုံးနှုန်း ကူးစက်နှုန်း မြင့်တက်သွားတဲ့ သြစတျေးလျနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ကို သင်ခန်းစာယူပြီး မြန်မာပြည်ကြီး ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရယ်က ကင်းဝေးအောင် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် လူများစွာ ကို မထိခိုက်အောင် စည်းကမ်းလေးတွေသေချာလိုက်နာပေးပါ။
ကဲဒီလောက်ဆို ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ တတိယလှိုင်းစစ်ဆင်ရေးကို မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ တစ်ယောက်တစ်ယောက်ချင်းစီက မကူးစက်အောင် အကောင်းဆုံး ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလေးတွေသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်နော်.. မြန်မာနိုင်ငံကြီးကံကောင်းပါစေနော်….